Su'aal: Luga inta hoose oo laga dhaxamoodo?
Author Topic: Su'aal: Luga inta hoose oo laga dhaxamoodo? (Read 1067 times)
« on: January 08, 2017, 03:17:27 PM »
Bacdal salaan waxaan rabay inaan ku waydiiyo xaaskayga ayaa habeenkii ka cabata lugaha iyadoo ka dareemaysa qabaw xad dhaafa habeenkasta.
Markaas maxaa keenaya inay lugaha intaa hoose ka dhaxamooto.
Jazzaka allah dhamaantiin mahadsanid Dr.
I am waiting your answer insha alla Sr.
Re: Su'aal: Luga inta hoose oo laga dhaxamoodo?
« Reply #1 on: April 08, 2017, 05:39:03 PM »
Wixii jilbaha ka hooseeyo oo laga dareemo waxay astaan u tahay cudurro dhowr ah oo ugu horeeyo xanuunka loo yaqaano "Peripheral artery disease" kanoo ah in xididada lugaha ay ciriiri noqdeen ama dhiigga sidii la rabay aysan u wadin, sida hadduu qofka qabo cudurka macaanka, cudurka kolestaroolka, cudurka thryoid-ka, cudurka dhiig-yarida iyo cudurrada toos u abaaro xididada.
Waa muhiim in dhakhtar lala xiriiriyo qofkii si joogto ah iskugu arko cilladaan, wuxuu kaloo qofka dareemi karaa kabuubyo, tinta lugaha oo yaraanayso ama midabka oo isbadalayo iyo cidiyaha oo madaw soo galayo.
Views: 4595 July 02, 2017, 11:30:43 AM
Views: 1468 October 26, 2016, 06:39:23 PM
Views: 3050 November 14, 2007, 12:30:34 AM
Views: 6354 August 08, 2011, 07:55:39 PM
Views: 2593 April 03, 2016, 10:41:02 PM